Dhallinyaradu wey ku qanacsan yihiin hab nololeedkooda galmo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Laba shakhsi oo gacmaha is haysta oo meel maraya. sawir: PONTUS LUNDAHL
Dhallinyaradu wey ku qanacsan yihiin hab nololeedkooda galmo
La daabacay tisdag 9 maj 2017 kl 16.09
Dahllin-yaro badan oo iswiidhish ahi waxey suulka kor ugu taageen hab-dhaqankooda nololeed ee galmada. Tiro kor u dhaafaysa bar 56% ee wax laga weeydiiyay ayaa sidaa qaba.
Baaris ballaaran oo uu machadka caafimaadka bulshadu ku sameeyay hab-dhaqanka nololeed ee galmada ayey dhallin-yaradaasi kaga jawaabeen inay ama ku qanac-san yihiin amaad aad ugu qanac-san yihiin noloshooda galmada.
War-bixintan oo maanta oo salaasa ah la soo ban-dhigey ayey qayb ka ahaayeen 7 755 ruux oo da’doodu u dhexeeyso 16-29 sannadood iyadoona su’aalo gun u dhac ah laga weeydiiyay dabeecadahooda galmada, sida uu qoray war-geeyska Dagens Nyheter (DN).
- Waxaa na saaran masuuliyad sidii aannu gun-dhig ugu soo ban-dhigi lahayn hayado kala duwan, sida iskuullada, goobaha caafimaadka iyo sidii ey u ogaan lahaayeen halka ey howlahooda xoogga ku saari lahaayeen, sida ay sheegtay madaxa baarista Anna-ChuChu Schindele, mar ay la hadleeysay war-geeyska DN.
War-bixinta ayay sidoo kale ku caddeeyd in 90% dhallin-yaradii la wareeystey ey galmadoodii ugu dambeeysay u sameeyeen si ey ku qanac-sanaayeen iyagu.
War-bixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay iney hablihii baaristan ka qayb qaatey loo geeystey falal faqooq ama meel ka dhac ah, halka tiradaasi wiilashu ay ahayd 15%.